10 Common Symptoms in Infants and Young Toddlers ကလေးတှမှော အဖွဈမြားတာ လက်ခဏာ (၁ဝ) ခု – Mawlamyine Daily
10 Common Symptoms in Infants and Young Toddlers ကလေးတှမှော အဖွဈမြားတာ လက်ခဏာ (၁ဝ) ခု
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 October 10, 2020 1 Minute
မျောလမွိုငျ၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀
1. Stomach Ache ဗိုက်နာကလေးငိုရငျ နို့ဆာတာ၊ လနောတာဖွဈနိုငျတယျ။ ကလေးနညျးနညျးကွီးရငျ သနျကောငျဖွဈနိုငျတယျ။ လကွေောငျ့နာရငျ ခါးကော့ ငိုမယျ။ Colic ဗိုကျရဈနာတာ၊ Gastroesophageal reflux အစောခွရေညျအထကျဆနျတာ၊ Food intolerance အစာကို လကျသငျ့မခံနိုငျတာ၊ Virus ဗိုငျးရပျဈတှကေနေ ဖွဈစနေိုငျတယျ။ အနျတာ၊ ဖြားတာ၊ ဝမျးပကျြတာတှနေဲ့ရောရငျ ဆရာဝနျပွပါ။
2. Fever ကိုယျပူခွငျးကလေးငယ်ငယ်လေးတွေ နည်းနည်းကိုယ်ပူတာကိုတောင်မှ သတိထားရမယ်။ နားကိုက်တာ၊ ချောင်းဆိုးတာ၊ မဆော့ချင်-မလှုတ်ချင် ဖြစ်တာ၊ အနီစက်တွေထွက်တာ၊ အန်တာ၊ ဝမ်းလျှောတာတွေ ရှိနေ-မနေစစ်ဆေးပါ။
3. Constipation ဝမ်းချုပ်ခြင်းကလေးဆိုတာ ဆီးတရွှဲရွှဲ ဝမ်းတစိုစိုနေတယ်။ ဝမ်းပျက်သလိုပဲ ချုပ်နေတာလဲ မကောင်းဘူး။ စိတ်ပူစရာ သိပ်မလိုပါ။ တကယ်ဝမ်းက မာနေပြီး သွားမရရင် ရေပိုတိုက်ပေးပါ၊ အသီးရည်တိုက်ပါ။ မရရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ဗိုက်နာနေပြီး အန်လာရင်တော့ အရေးကြီးတယ်။
4. Rashes အနီစက်တွေထွက်ခြင်းကလေးအသားအရေက သိပ်နူးညံတယ်။ အထိမခံသလိုနေသေးတယ်။ မသင့်တာတွေများတယ်။ Diaper rash (ဒိုင်ယာပါ) ကနေလဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ Eczema နှင်းခူနာမဖြစ်အောင် ဆပ်ပြာပြင်းတာ မသုံးပါနဲ့။ ခေါင်းလျှော်ရည် ပြင်းတာမသုံးပါနဲ့။ ပေါင်ဒါရိုးရိုးသာသုံးပါ။ အရေပြား ခြောက်မနေစေပါနဲ့။
5. Cough ချောင်းဆိုးကလေးတွေချောင်းဆိုးတာ အသံအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ဖျံတွေလို အသံထွက်တာကို Croup ခေါ်တယ်။ နဲနဲကိုယ်ပူပြီး ချောင်းဆိုရင် အအေးမိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အပူချိန်များရင် နူမိုးနီးယား သတိထားပါ။ တုပ်ကွေးက အတော်ပူတယ်။ Wheezing စီစီစီစီ အသံကြားရင် ပန်းနာဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုးဝင်တာကဖြစ်တယ်။ Pertussis ကြက်ညှာချောင်းကို Whooping sound အသံထွက်တယ်။ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးကို ကလေး ၄ နှစ်အောက်ကို ဆရာဝန် မညွှန်ဘဲ မပေးသင့်ပါ။
6. Diarrhea ဝမ်းပျက်ခြင်းကလေးတွေမှာ ဖြစ်တာအများဆုံးလို့ ပြောနိုင်တယ်။ ရောဂါပိုးဝင်လို့၊ အစာကို လက်သင့်မခံနိုင်လို့၊ ဖျော်ရည်တွေ သောက်တာများလို့ ဆိုတာတွေကြောင့် ကလေးတွေမှာ ဝမ်းပျက်နိုင်တယ်။ ဝမ်းရပ်တဲ့အထိ ကလေးကို အိမ်မှာသာနေစေပါ။ ရေဓါတ်၊ ဆားဓါတ်ဖြည့်ပေးပါ။ နို့-နို့ထွက်အစာတွေ၊ ဖိုင်ဘာများတာတွေ၊ အဆီများတာတွေ မကျွေးသေးပါနဲ့။ မပျောက်ရင်၊ ဆရာဝန်ခေါ်ပါ။ အဖျား 101.4 ကျော်ရင်၊ အန်ရင်၊ ဝမ်းထဲသွေးပါရင်၊ ဝမ်းမဲနက်နေရင်၊ ဗိုက်နာရင်၊ ၂၄ နာရီနဲ့ မသက်သာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
7. Teething Pain သွားနာ၆ လလောက်မှာ ငယ်သွား စပေါက်တယ်။ ကလေးက အနေရထက်မယ်။ Rubber teething ring ကိုက်စရာ ပေးထားနိုင်တယ်။
8. Gas Pain လေနာBurping, crying, and flatulence အသံစူးစူနဲ့ ငိုမယ်၊ လေလဲတက်မယ်ဆိုရင် လေနာတာဖြစ်မယ်။ Colic နဲ့မတူဘူး။ (ကိုးလစ်) ဖြစ်တာက ချော့မရဘူး။
9. Stuffy Noses နှာရည်ယိုကလေး မအေးမိရင် နှာရည်ယိုမယ်။ အသက် ၄ နှစ်အောက် ဆေးဆိုင်က အလွယ်ဝယ်ရတဲ့ဆေး ဆရာဝန်မမေးဘဲ မတိုက်ပါနဲ့။ Saline drops ဆားရည်အစက်ချဆေး သုံးတာ စိတ်ချရတယ်။ Mucus အချွဲတွေကျဲစေမယ်။ Bulb syringe နဲ့ စုပ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်။ Vaporizer ဖွင့်ထားပေးပါ။
10. Keeping Calm ကလေးချော့ပါကလေးချော့မဲ့ မိဘတွေက အရင် စိတ်အေးလက်သာရှိပါစေ။ ငါ့မှာ အစွမ်းအစရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုထားပါ။ နောက်ဆုံး မရရင် ဆရာဝန်ခေါ်လို့ရတာပဲလို့ သိထားပါ။